भक्तपुर, भट्टापुर र भट्टीपुर | नेपाल इटाली डट कम
भक्तपुर, भट्टापुर र भट्टीपुर
मेरो प्यारो सहर भक्तपुर, ऐतिहासिक एवं सुन्दर नगर भक्तपुर आज धुवाँ, धुलो र प्रदूषणमा सास फेर्दै छ । विश्वलाई सभ्यता सिकाउने सहर भक्तपुर आज आफैँ असभ्यताको सिकार बन्दै छ । कला र संस्कृतिको धनी भक्तपुर आज आफैँ विकृति र विसंगतिको मारमा पर्दै छ । भक्तहरूको सहर अब भ्रष्टहरूको सहर बन्दै छ । बेइमानहरूको स्वर्ग र इमानदारहरूको नर्क बन्दै छ भक्तपुर । कुनैबेला घरभन्दा मन्दिर बढी भएको नगरका रूपमा चर्चित भक्तपुरमा आज गाउँभन्दा भट्टा बढी, टोलभन्दा भट्टी बढी भइसकेको छ । इँटाभट्टाको विषाक्त धुवाँ, धुलो र प्रदूषणले चुनौती दिइरहेका छन् ‘सफा सुन्दर’ भक्तपुरलाई । हरेक साँझ टोलटोलका, पाइलैपिच्छेका भट्टीपसलले जवाफ दिइरहेका छन्— ‘सचेत’ भक्तपुरलाई । फोहोरी शब्द र स्वार्थी मनोवृत्तिले गिज्याइरहेका छन् ‘शिक्षित’ भक्तपुरलाई । मानिसलाई विचारले होइन जागिरले बाँध्ने गलत राजनीतिक संस्कारले गर्दा उच्च शिक्षा उच्च विचारका लागि होइन, उच्च छलछामका लागि साबित हुँदै छ भक्तपुरमा । शोषणरहित समाजको स्वाङ रच्नेहरूसमेत आफ्नो नाकैमा शोषण र अन्याय हुँदा पनि ढुंगाको मुटु लिएर मूकदर्शक भएका छन्, शोषककै पक्षमा वकालत गर्दै ।
एकजना थिए नेता मकवानपुरमा रूपचन्द्र बिष्ट, जसले मकै नफल्ने माटोमा तरकारी उब्जाउन सिकाए गाउँले किसानलाई । अनेक तालिम उन्नत बीउबीजनको व्यवस्था गरे । उजाड भूमिलाई उर्वर बनाएर जनताको जीवनस्तर उकासिदिए ती नेताले । आज पनि काठमाडौंमा पालुङ, मकवानपुरको तरकारीको राम्रो बजार छ । नेता त भक्तपुरमा पनि छन् । तर विडम्बना, भक्तपुरका नेताले उर्वर माटोमा वैज्ञानिक खेती, व्यावसायिक खेती गर्न सिकाएनन्, उल्टो मलिलो माटो पोलेर इँटा बनाउन दिए । आज उर्वर भूमि उजाड भएको छ । तरकारी उब्जने ठाउँ मकै नउम्रने मरुभूमिमा फेरिएको छ । बालीनाली, खेतीपाती, बाटोघाटो, पानीको स्रोत, प्राकृतिक स्वरूप सबै नष्ट, ध्वस्त र अस्तव्यस्त हुँदै छन् । मुठ्ठीभर व्यक्ति करोडपति बनेका छन् बहुसंख्यक मानिसलाई खाकपति बनाउँदै । राम्ररी देखियो, कति फरक हुँदोरहेछ जनपक्षीय राजनीति र धनपक्षीय राजनीतिमा !
केवल चन्दा र आर्थिक सहयोगका लागि राजनीतिक पार्टीले भट्टा र भट्टीको शोषण, अन्याय, अत्याचार र प्रदूषणको समर्थन गरिरहेकाले तिनीहरू व्यवहारवादीका नाममा अवसरवादी भएको प्रमाणित हुन्छ । तिनीहरूले प्राकृतिक स्वरूप विकृत पार्ने पाप, मजदुरमाथिको चरम शोषण, किसानको उर्वर माटो उजाड बनाउने दुष्कार्य, वातावरणीय विनाश, बालीनालीको ह्रास, बाटोघाटो र पानीस्रोतको नाश, अकाल मृत्युको त्रास अनि अन्याय-अपराधको समर्थन गर्दै छन् । किनभने, तिनीहरूले सिद्धान्तलाई स्वार्थले प्रतिस्थापन गरिसकेका छन् ।
तर्क त यसरी पनि गर्न सकिन्छ, भट्टा-भट्टी र धनवादी पार्टीमा एउटा समानता छ । दुवैले प्रदूषण फैलाउँछन्, एउटाले वातावरण प्रदूषण गर्छ, अर्कोले वैचारिक प्रदूषण । भट्टा र भट्टीले वातावरण विषाक्त पार्छन्, धुवाँ, धुलो र प्रदूषण गरेर । धनवादी पार्टीले विचारमा विष छर्छ— कुराले एकथोक, कामले अर्को थोक गरेर, नयाँ-नयाँ भ्रमको आविष्कार गरेर । समाजवाद र साम्यवादको राग अलापेर भित्रभित्रै पुँजीपतिसँग भाग मिलाउँछन् तिनले । अतः समाजवादको नारा भजाएर वातावरण प्रदूषण र वैचारिक प्रदूषण गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ- ‘समाजवाद इँटा-भट्टाबाट उत्पादन हुँदैन । समाजवाद भट्टीमा किन्न पाइँदैन । समाजवाद दरबारको पटांगिनीमा उमि्रँदैन, न त समाजवाद पजेरो चढेरै आउँछ । मुखले जेसुकै वाद भने पनि व्यवहारतः धनवादमै लिप्त छन् शुभलाभका पारंगतहरू ।
तथ्यांक हेर्‍यौँ भने थाहा हुन्छ, यतिविधि भट्टा र भट्टी बढाइए पनि, विकृति, विसंगति र प्रदूषण फैलाइए पनि, भक्तपुरको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा कम छ । कारण सायद मजदुर र किसानबाट सोसेका पैसा ती भट्टावाल र भट्टीवालले डान्स रेस्टुरेन्ट र अनावश्यक क्षेत्रमै फजुल खर्च गर्दा हुन्, लुटको धन फुपुको श्राद्ध भनेझैँ । सारमा ठुल्ठूला पुँजीपति र कालाबजारियालाई नै पोस्ने काम भएको छ भट्टा र भट्टीबाट । र, यसका हिस्सेदार हुन् यहाँका राजनीतिक पार्टी र नेताहरू ।
भ्रमका आविष्कारकहरूले बुझ्नुपर्छ, विभिन्न भ्रमजाल छरेर, शोषण, अन्याय, अत्याचार र प्रदूषण फैलाउने भट्टाको समर्थन गरेर, अब पनि भक्तपुरलाई भट्टापुर र भट्टीपुर नै बनाइराख्न खोजिन्छ भने जनताले वातावरण प्रदूषण गर्ने र वैचारिक प्रदूषण फैलाउने दुवैलाई दण्डित गर्नेछन् । भ्रान्तिकारीहरूलाई चेतना भया !
« ३६ जना छानिए मिस नेवाः २००९ को लािग
संसदमा मन्त्रीहरु जवाफ दिँदै, बजेट आज पारित हुने »